Ducada Ilmaha Quduuska ah ee Atocha. ? Wadooyinka Furan, Ilaalinta iyo Caafimaadka.
Ducada Ilmaha Quduuska ah ee Atocha. Kuwa inaga mid ah oo aaminka ah aaminsanahay kuna dhaqma kaatigoolku waxay sameeyeen xitaa hal jeer nolosha oo dhan u duceeya Ilmaha Quduuska ah ee Atocha qaasatan wadamada sida Venezuela, Spain, Colombia, Honduras, Filibiin, Mareykanka iyo Mexico oo ah meesha ugu dambeysa ee lagu xushmeeyo awood badan iyo halka ay ku leedahay meelaha qadiimka ah halkaasoo lagu sharfo maalin walba taas oo kumanaan qof soo booqda sanad walba.
Waa mid ka mid ah u doodista ilmaha Ciise ee isagu aad u caan noqday sababtuna tahay mucjisooyinka badan ee loo yaqaan ama loo aaneeyey isaga.
1 Ducada Ilmaha Quduuska ah ee Atocha Waa kuma?
2 U ducee ilmaha barakeysan ee Atocha inuu furo wadooyinka
3 U ducee ilmaha quduuska ah ee Atocha ilaalinta
4 Salaad mucjisooyin caafimaad ah
5 Santo Niño de Atocha ma mid aad u xoog badan baa?
Ducada Ilmaha Quduuska ah ee Atocha Waa kuma?
Magaalada Atocha waxay ku taalaa Spain waxaana la ogyahay in qarnigii saddex iyo tobnaad gabi ahaanba ay ku soo duuleen muslimiinta.
Waxay xidheen dhammaan kuwa ku dhaqma caqiidada masiixiga ayagoon haysan cunno ama cabbitaan sidii hab ciqaab daran oo caqiidadooda ah.
Waqtigaas kaliya caruur laba iyo toban sano jir ah ayaa loo ogolaaday inay quudiyaan maxaabiista halkaasna waxaa ku sugnaa canugga Quduuska ah ee Atocha.
Maxaabiistu way bilaabeen u hesho booqasho ilmaha Wuxuu u imanayey maalin kasta isagoo leh dambiil cunto ah oo ay qof walba cunaan ilaa uu ka dhergo.
Arinta la yaabka lihi waxay ahayd in cuntadu aysan dhamaan oo ay dambiilku had iyo goor wax u haystaan.
Wiilku wuxuu gashaday dhar fudud sida duul laakiin wuxuu arkay mucjisada ah isku dhufashada rumaystayaasha cuntada rumeysan inay tahay isla Ciise inuu u yimid inuu quudiyo.
U ducee ilmaha barakeysan ee Atocha inuu furo wadooyinka
Infante de Atocha, naxariis iyo naxariis leh, waxaan u imid hortaada inaan kuu sheego inta aan jeclahay oo aan kuu baahanahay, waxaan kaa rabaa inaad u jeesato indhahaaga naxariista badan ee aad igu aragto rajo beelka iyo dhibaatada i haysa. Dhibaatooyinku waa halis oo xalna uma helin, Adiga oo ah mucjisada sidaa darteed ha iga tegin: waxaan kugula dardaarmayaa inaad ii soo dirto kaalmadaada, waxaan weydiisanayaa deg deg inaad uhesho raaxo iyo caawimaad sii wad Akhriska Quduuska ah iyo Ubadka Quduuska ah ee Atocha, ilaaliyaha dadka oo dhan, ilaalinta oo ah kuwa aan caawinta lahayn, bogsashada rabaani ah ee cudur kasta.
Ilmaha Quduuska ah ee awooda leh: Waan ku salaamay, waan kugu mahad naqayaa maanta, waxaanan kuu salaamayaa: (Saddexda Aabayaasheen, Sadar Hail Marwo iyo Sagaal sharaf), xuska maalinta aad ku aas aasay qalbi furan oo astaan ​​u ah hooyadaa macaan iyo jacaylka badan, magaalada quduuska ah ee Yeruusaalem ilaa Beytlaxam.
Iimaanka aan kugu qabo, dhegeyso codsiyadayda, kalsoonida aan adiga kugu qabo, ii dhiib waxaan si is-hoosaysiin ah u codsado: (weydii waxa aad rabto inaad ku guuleysato).
Aniga, oo adiga kugu jeclaada wax walba, waxaan jeclahay inaan kugu ammaani doono dhamaadka, oo waxaan jeclahay xigmadda Cherubim iyo Seraphim, oo xigmad wanaagsan leh. Waxaan rajeynayaa, Ilmaha Quduuska ah ee qaaliga ah ee Atocha, jawaabta farxadda leh baryootankaygu.
Waan ogahay inaanan idinku xumayn doonin, oo weliba aad ii siin doontaan dhimasho wanaagsan, si aan kuugu raaco Beytlaxam sharaf.
Isaga, dhammaan waxyaabaha qarsoodiga ah oo siyaalo badan oo khiyaanooyin ah ayaa na siiya mucjisada ah inuu ina tuso waddooyinka mar walba si aan ugu dhex safrinno kalsooni buuxda iyo xasillooni.
Kuwaas oo u muuqda kuwa qaldan ama aan macquul ahayn in laga gudbo, waa hubaal in taasi jirto Caawinta Ilmaha Quduuska ah ee Atocha waad ku gudbi kartaa.
Tukashadu waxay jidkeenna u furi kartaa furfurnaanta dhaqaalaha, daraasadaha, qoyska lala yeesho ama qorshayaashaas ama yoolalka aan rabno inaan gaarno.
U ducee ilmaha quduuska ah ee Atocha ilaalinta
Ilmaha caqliga leh ee Ciise ee Atocha, ilaaliyaha guud ee dadka oo dhan, ilaalinta guud ee dadka tabaaleysan, dhakhtarka rabaani ah ee cudur kasta.
Ilmo aad u xoog badan, waan ku salaamay, waan kugu mahadnaqayaa maanta oo waxaan kuu soo bandhigayaa seddexdaan Aabeheen, Marwo Marwo sharaf, adoo xusuusinaya safarkaas aad ku tagtay, oo aad ku muteysatay muuqaalka hooyadaa ugu jacaylka badan, magaaladaas quduuska ah ee Yeruusaalem ilaa ay ka timid. si goobta dhalashada.
Xusuus-tirkan aan sameeyo maanta waxaan kaa codsanayaa inaad i siiso wixii aan tukado ...
Oo taas ayaan u soo bandhigayaa waxyaalahan, oo waan la raacaa kuwa ka mid ah kooxdii keruubiimta iyo Seraafim, oo xigmad lagu sharraxay, oo aan u rajaynayo, wiilka Atocha, inaad ku faraxdid waxaan kuu weyddiisto oo adigaan kuu sheeganayaa, oo waan hubaa inaanan bixi doonin. Qalbi jabsan oo adiga kugu saabsan, oo waxaan kugu heli doonaa geeri wanaagsan, si aan kuugu soo raaco goobta dhalashada ammaanta.
(Halkaan waxaa laga codsaday iyo saddex aabayaal ah, Saddex Hail Marys iyo sharaf ayaa lagu tukaday)
Difaaca kuwa rumeeyey isaga inkasta oo duruufaha jira.
iyo sidoo kale caawiyay oo ilaaliyey dadka kii arkay markay u muuqatay markii ugu horraysay ayaa annaguna annagana nagu samayn doona.
Waxaa laga yaabaa inuusan mar dambe u muuqan qaab ilmo ama inuu arko isagoo jir ahaan noo soo dhowaanaya laakiin mucjisadu had iyo jeer waa la sameyn doonaa markaan weydiisano iimaan iyo runti inuu maqlo oo uu yimaado yeedhitaankeena gargaarka.
Salaad mucjisooyin caafimaad ah
Ilmaha Quduuska ah ee Caafimaadka Quruxda badan oo macaan !, cunugeyga gacaliyahayga, raaxada weyn ee aan u imid: Waxaan imaadaa adiga hoygaaga oo ka cidhiidhsan dhibaatada haysata cudurkayga, waxaanan ku dhaqaaqay kalsoonida ugu weyn si aan u baryo gargaarkaaga rabaani ah.
Waan ogahay markii aad dunidan joogtay inaad u murugootay qofkasta oo dhibban, gaar ahaan kuwa silica xanuunka hayey.
Isaga infinito jacaylka ay ahayd inaad bixiso, waad ka bogsiisay xanuunadooda iyo murugadooda, mucjisooyinkaaguna waxay ahaayeen muujinta la taaban karo ee wanaaggaaga, jacaylkaaga weligaa iyo naxariistaada.
Sidaa darteed, Ilmaha qaaliga ah ee Caafimaadka!, Cunugeyga qaaliga ah, raaxada weyn, waxaan ku weydiisanayaa inaad i siiso xoogga lagama maarmaanka u ah adkeysi xanuunka, raaxada iyo raaxada waqtiyada ugu adag iyo, intaas oo dhan, nimco aad u khaas ah, si aan u soo ceshado xooggayga, tamarteyda, caafimaadkeyga, haddii ay ku habboon tahay wanaagga naftayda.
Taas ayaan kugu ammaanayaa, waan kugu mahadnaqayaa oo waan ku jeclahay cimrigayga oo dhan.
Qaado awoodda tan salaad mucjiso ah loo aado Santo Niño de Atocha si loo helo caafimaad.
Ma jiraan wax dhib ah oo uusan Ilmaha Quduuska ah ee Atocha ku dhaqmin ku siin kara caawintaada xoogga badan.
Xusuusnow inaan ka hadlayno isla Rabbi Ciise Masiix oo inoogu dhintay iskutallaabtaas ka dibna sara kacay maalintii saddexaad, isla kii ka muuqda kutubta xurmada leh.
Ma jiro wax cudur ah oo isagu isagu aanu soo qaadin tan iyo markii uu ku dhacay cudurradeennii dagaallada, taasi waa iimaanka aannu haysanno markii aannu qabanno ducadan codsanaya mucjiso rabaani ah caafimaadkeena.
Santo Niño de Atocha ma mid aad u xoog badan baa?
Sheekada Ciise ilaa markaan imid uurkii Maryantii bikradda ahayd mucjiso iyo xoog badan.
Aamminaadda in awooddan mar hore luntay ay tahay ficil iimaan la'aan oo inta badan noo timaadda iyada oo ah badeecado daanyeer ah oo isla cadowgaas maskaxdeenna ku beerta si aannu uga dhigno shaki.
Inkasta oo sannado badan oo ka mid ah geerida iyo sarakicidda Ciise Masiix, waxaan aaminsanahay awoodiisa mucjisada ah.
U yeerista canugga Quduuska ah ee Atocha waa calaamad muujinaysa in awoodeedu weyn tahay oo uu wali xasuusto annaga oo si aamin ah isaga u aaminsan. Aynu sii wadno inaan rumeynno oo aan baryono rumaysadna weligiis wuu sii wadi doonaa inuu na caawiyo oo aan uga jawaabno codsiyadayada jacayl aan dhammaad lahayn.
Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay Ilmaha Quduuska ah ee salaadda Atocha.
Salaad xoog badan oo ku saabsan soo laabashadeyda
Salaadda Saint Mark ee Leon oo timaada
U soo duceeya mucjisooyinka Saint Helena